Hal Qof iyo Hal Cod Waa Lagu Hungoobay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Hal Qof iyo Hal Cod Waa Lagu Hungoobay
Hal Qof iyo Hal Cod Waa Lagu Hungoobay
Golaha Barlamaanka Federaalka ah iyo Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku heshiiyay in aan dalka laga qaban karin doorasho qof iyo codkiis ah sanadka soo socda. Kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay Afhayeenka Baarlamaanka Prof. Maxamed Cismaan Jawaari, waxaana goobjoog ka ahaa Raysul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada.
Saddexda qodob ee ay ku heshiiyeen labada gole ayaa waxaa fadhiga baarlamaanka oo ay soo xaadireen 158 mudane ka hor akhriyay Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre.
“Labada gole ee dowladda waxay isla garteen oo ay isku raaceen in sanadka 2016 aanay dalka ka dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod ah. In la qabto shirweyne heer qaran ah oo ay ka qeyb galayaan golayaasha dowladda iyo maamul-goboleedyada dalka, kaasoo looga tashanayo tallaabada ay dowladda qaadeyso si ay dalka doorasho uga dhacdo 2016 Agoosto marka la gaaro, maadaama aanay dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod ah iyo in qaban qaabada howsha hiigsiga 2016 iyo tallaabada ay dowladda qaadeyso lagu soo gabagabeeyo dhamaadka sanadkan 2015, si 2016 ay shaqada u billaabato” ayuu war-saxaafeedka ka akhriyay Xildhibaan Goodax.
Go’aankan ayaa ku soo beegmay xilli Muqdisho lagu qabanayay shir looga arrinsanayo hiigsiga 2016 oo ay ka qeyb galayaan ergooyin ka socda beesha caalamka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Sidoo kale waxaa go’aankan loo arkaa mid ay dowladda dhexe ku dooneyso in ay hesho waqti kordhin ama ay saameyn xooggan ku yeelato qaabka doorasho ka duwan middii lagu ballamay dalka uga dhici karto, taas oo fursad u siineysa madaxda haatan joogta iyo kuwa maamul-goboleedyada in ay iyagu ka arrinsadaan waxa xigi doona marka waqtiga xukuumadda haatan shaqeysa uu dhamaado.
Raysul wasaraaha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali ayaa sheegay in xukuumadda ay qaban doonto shirweyne looga tashanayo sida dalka doorasho aan hal qof iyo hal cod ahayn ay uga dhici lahayd, waxaana kulankaas lagu marti qaadayaa maamul-goboleedyada haatan jira.
Madaxweynaha Jamhuuryadda Federaaka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay Wargeyska Xaqiiqa Times dabayaaqadii bishii Maarso ee sanadkan ku sheegay in haddii hal qof iyo hal cod aan la gaari karin wixii la gaari karo ay xukuumadda ka shaqeyn doonto.
Xiriirka dowladda dhexe iyo maamul-goboleeydada Puntland iyo Jubba ayaa aad u liita, kaas oo ka dhashay dhismihii maamulka Galmudug oo ay Puntland saluugtay. Lama garan karo sida ay maamul-goboleedyada haatan jira iyo dowladda dhexe ugu heshiin karaan qaab doorasho oo ay dhamaan ku wada qanacsan yihiin, waxaana muuqata in jahwareer siyaasadeed uu ka iman doono hannaanka doorasho lagu kalsoonaan karo oo dalka ka dhacda mar haddii ay awoodda maamul qeyb ka noqdeen maamul-goboleedyo ku xiran dalal kale.
W.D: Cabdinuur Maxamed Axmed
Previous articleGal-Mudug Mise Gal-Nus-Mudug?
Next articleCaddadka 22-aad ee Xaqiiqa Times